२१ पुस, काठमाडौं । सरकारले काठमाडौंको बुढानिलकण्ठमा राष्ट्रिय आयुर्वेद, पञ्चकर्म तथा योग सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले बुढानिलकण्ठ- ४ मा सरकारी लगानीमा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो ।
१३ रोपनी ११ आना जग्गामा फैलिने आयुर्वेद, पञ्चकर्म तथा योग सेवा केन्द्र सुरुमा ५० शैयाको हुनेछ । यसमा नसर्ने रोगहरुको उपचार आयुर्वेदिक पद्दतीबाट गरिने छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय आयुर्वेद विभागका चिकित्सक डा. शंकर गौतमका अनुसार केन्द्र स्थापनाको लागि आयुर्वेद विभागले एक करोड रुपैयाँ बजेट समेत छुट्याइसकेको छ । थप बजेट केन्द्र स्थापना भएसँगै थपिँदै जाने डा. गौतमले बताए ।
उनले भने, ‘हालका लागि पञ्चकर्मसहित नसर्ने रोगबारे उपचार गरिने यस केन्द्रमा सम्पूर्ण उपचार आयुर्वेद, योग र प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिमा आधारित हुनेछ । त्यसको लागि हामीले कार्यक्रम मन्त्रिपरिषदमा आजै पेश गरेकोमा पारित पनि भएको छ ।’
अब बजेट आउनासाथ अगाडिको काम सुरु हुनेछ । यद्यपी, अहिले नितिगत निर्णयमात्र भएकाले केन्द्रको निर्माण कहिलेसम्म हुन्छ भनेर अहिले नै यकिन भन्न नसकिने डा. गौतम बताउँछन् ।
वीरको बजेटमा कर्मचारीका आफन्तको रजाइ
हाडजोर्नी रोगबाट यसरी राहत
व्रत बस्दा शरिरमा हुने परिवर्तन र ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु
रगतमा कोलेस्ट्रोल घटाउन
तपाईंका यी आनीबानी, जसले थाइराइड ग्रन्थी प्रभावित हुन्छ
दशैंको मासु: यसकारण विषालु हुनसक्छ
मदिरा सेवनबाट वर्षमा ३० लाखको मृत्यु, अधिकांश पुरुष
होमपेज स्वास्थ्य-जीवनशैली स्वास्थ्य/जीवनशैली प्रमुख किशोरवयमा शारीरिक विकासका लागि आवश्यक छ यी कुरा
लसुनको हरियो पात खानुहोस अनि हुनेछ ७ वटा फाईदा नै फाईदा
आयुर्वेद विशेषज्ञको सल्लाह, ‘चिसोमा हुने समस्याको निदान यसरी गरौं’
तपार्इँको खुसीमा लुकेको हुन्छ जिवनसाथीको स्वास्थ्यको राज